Home » Lahatsoratra farany farany » tompon'andraikitra » Fondation Sandals Mahafinaritra! Inc. Mamorona Smiles
Vaovao Mafana • Karaiba • Hotels & Resorts • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Tiorka sy Kaicos Vaovao Vaovao
Belongers an-jatony no nilahatra tamim-pientanentanana teny amin'ny araben'ny Five Keys Road any Turks sy Caicos maniry ny hihaona sy hokarakarain'ny ekipa mpitsabo nify sy matihanina hafa ao amin'ny tobim-pitsaboana nify 1000 Smiles voalohany ao amin'ny nosy.
Ny fandaharana, izay manome fidirana amin'ny fikarakarana nify kilasy voalohany maimaim-poana, dia tantanin'ny orinasa tsy mitady tombony any Etazonia, Great Shape! Inc. ary ampian'ny sandry mpanao asa soa an'ny Sandals Resorts International (SRI) izay miasa Beaches Resorts - ny Sandals Foundation.
Hatramin'ny andro fanokafana ny Alatsinainy 15 Oktobra, dia olona 700 eo ho eo no nahazo tombony tamin'ny famenoana, fanadiovana, fitrandrahana, lakandrano fakan-kazo, sealant, denture ary maro hafa avy amin'ny ekipa 60 Great Shape! Inc. mpilatsaka an-tsitrapo.
Joseph Wright, Tale Mpanatanteraka Mpanorina ny Great Shape! Inc. dia nilaza hoe: “Faly izahay nanangana ny Tetikasa Smiles 1000 any amin'ny Nosy Turks sy Caicos, 18 taona taorian'ny tetikasanay voalohany tany Negril, Jamaika! Ny areti-mifindra Covid-19 dia nanelingelina mafy ny fahafahan'ny governemanta manome fikarakarana nify mahazatra any amin'ireo firenena iasantsika. Ka hitanay fa rehefa afaka 2 taona, dia tena ilaina ny fikarakarana nify.”
Ao Turks sy Caicos," hoy i Wright nanohy, "Mitovy ny tantara. Lava ny andalana, ary tena mankasitraka ny vahoaka. Miaraka amin'ny fanampian'ny Sandals Foundation, ny fandefasana Tetikasa Smiles 1000 any Turks sy Caicos dia nilamina sy nahomby na dia teo aza ny fanamby maro atrehintsika amin'izao fotoana tsy manam-paharoa izao.”
Ny toeram-pitsaboana dia misokatra isan'andro amin'ny 8:30 ka hatramin'ny 4:30 miaraka amin'ny fiasan'izy ireo amin'ny fanaraha-maso amim-pitandremana ny protocoles sy ny torolàlana momba ny fiarovana amin'ny Covid-19.
Hatramin'izao, nankafizin'ireo ekipa ireo ny fitsidihan'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana, anisan'izany ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena sy ny solontena voafidy ho an'ny Distrikan'i Five Cays, Hon. Rachel Taylor. Hon Taylor dia afaka nihaona tamin'ny ekipa mpilatsaka an-tsitrapo ary niresaka momba ny mety ho fandaharan'asa ho avy miaraka amin'ny Great Shape! Inc. sy Sandals Foundation.
Heidi Clarke, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Sandals Foundation, dia faly nahita ny firotsahan'ny fianakaviana, nanamarika fa ny fampitomboana ny fidirana amin'ny tolotra ara-pahasalamana dia singa fototra amin'ny asan'ny fikambanana mpanao asa soa amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina ao amin'ny faritra.
“Tena faly izahay mahita ny fanitarana ny fandaharana nify 1000 Smiles ho any amin'ireo Nosy Turks sy Caicos tsara tarehy. Mamorona vondrom-piarahamonina salama ny olona salama ary amin'ny maha-fikambanana Karaiba anay, dia manolo-tena tanteraka izahay hanao izay azonay atao mba hampiasana vola amin'ny fampandrosoana maharitra ny sehatry ny fahasalamana sy ny tolotra ao amin'ny faritra.”
"Tato anatin'ny valo ambin'ny folo volana lasa izay dia henjana ho an'ny fianakaviana manerana an'izao tontolo izao," hoy i Clarke nanohy ny teniny, "Tena mahatsapa izahay fa misy fiantraikany amin'ity areti-mifindra ity ny fahafahan'ny fianakaviana mamaly ny sasany amin'ireo zavatra tena ilainy. Ny fahasalamana am-bava tsara dia mampihena ny mety hisian'ny aretina lehibe hafa ary noho izany amin'ny alàlan'ireo toeram-pitsaboana ireo dia tena te hanampy olona betsaka araka izay tratra izahay hikarakara ny iray amin'ireo fampiasam-bola ara-pahasalamana lehibe indrindra azony atao, "Heidi Clarke, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny kapa Fototra.
Tsara endrika ny Fondation Sandals! Inc. fandaharana nify dia foto-tsakafo manerana an'i Karaiba nanomboka tamin'ny 2003, miasa any amin'ny nosy Jamaika, St. Lucia ary Grenada.
Eto amin'ny Nosy Turks sy Caicos, ireo mpilatsaka an-tsitrapo misionera dia ampiantranoina ao amin'ny Beaches Resorts miaraka amin'ny fanohanana ara-pitaovana, fotodrafitrasa ary mpiasa voarakotry ny sandry mpanao asa soa an'ny hotely.